ကလေးအစာခြေစနစ်ပြဿနာများ - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ0အနက်မှ 1
သားသားမီးမီးတို့မှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ အစာခြေနစ် ပြဿနာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ။ ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ပေးမလဲဆိုတာကို ဒီကဏ္ဍလေးမှာ လေ့လာလိုက်ပါ။
သင့်ရင်သွေး ဘာလို့ အော့အန်နေတာလဲ? ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
ရင်သွေးလေးတွေဟာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အကြောင်းပြချက် ရေရေရာရာမရှိပဲ အော့အန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် မိဘတွေမှာ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိနဲ့ ပြာယာခတ်တတ်ကြတာ သဘောဝပါပဲ။ တကယ်တော့ ကလေးတွေ အော့အန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေဟာ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး ဘယ်လိုပြဿနာကြောင့် အော့အန်နိုင်လဲဆိုတာကို သိနားလည်ထားမယ်ဆိုရင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဖြေရှင်းကုစားပေးနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ အဖြစ်များတာကတော့ အစာအိမ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောင့် ဒါမှမဟုတ် အစာအဆိပ်သင့်တာမျိုးတွေကြောင့်ပါ။ ဒါပေမယ့် တခြားအကြောင်းအရင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ချို့တဲ့တာပါပဲ။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါစေ အော့အန်တာကို သက်သာအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ချို့တဲ့တာဟာ အဖြစ်များတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ဂရုတစိုက်နဲ့ အစားအစာမပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရင် ရေဓာတ်ချို့တဲ့တာဖြစ်ဖို့ အလွန်နီးစပ်ပါတယ်။ အော့အန်တာအပြင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတာ၊ ပါးစပ် အာခေါင်ခြောက်တာ၊ ငိုကြွေးချိန်မှာ မျက်ရည်သိပ်မကျတာ၊ အရေပြားအေးစက်နေတာ၊ ပုံမှန်အတိုင်း ဆီးမသွားတာ၊ ဆီးအရောင်ရင့်လွန်းနေတာတွေပါဖြစ်နေပြီဆိုရင် သင့်ကလေး ရေဓာတ်ချို့တဲ့တာသေချာနေပါပြီ။ ရင်သွေး အော့အန်ခြင်းကို သက်သောစေမယ့် နည်းလမ်းများ အော့အန်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲက အဓိကအချက်တစ်ခုက ရေသောက်နည်းပြီး ရေဓာတ်ချို့တဲ့လို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ပြန်ပြည့်အောင် […]
ရင်သွေးလေးမှာ အစာခြေစနစ်ပြဿနာရှိနေပြီဆိုတာကို သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာများ
Dr. K Zin Thwe မှ ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေးထားပါသည်။ • 10/01/2022